साबधान ! एकाबिहानै झुक्याएर घरमा पसेर सुन चोर्दा चोर्दै समातिए यि युबक, यस्तो सम्म भन्न भ्याएका रहेछन? कसरी छिरे घर भीत्र ? हेर्नुहोस प्रतक्ष्य भिडियो – Taja Khawar
साबधान ! एकाबिहानै झुक्याएर घरमा पसेर सुन चोर्दा चोर्दै समातिए यि युबक, यस्तो सम्म भन्न भ्याएका रहेछन? कसरी छिरे घर भीत्र ? हेर्नुहोस प्रतक्ष्य भिडियो
प्रकाशित मिति: शनिबार, साउन ३०, २०७८ समय: १२:११:४०
पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर ८ मा एकाबिहानै चोरी भएको छ। पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर ८ स्थित आलुमाइला चोकमा बिहानको १० बजेको समयमा चोरी भएको छ। एकजना अपरिचित व्यक्ति घरको गेट बाट भित्र प्रवेश गर्छन र सुरुमा तल्लो तलामा चोरी गर्ने प्रयास गर्छन।
यता उती हेर्दै चोर्ने मौका खोजिरहेका चोरलाई भाडामा बस्ने दिदीले देख्छिन र सोध्छिन कसलाई खोज्नु भएको हो रु चोरले भन्छन घरबेटी हुनुहुन्न रु दिदीले घरबेटी माथी हुनुहुन्छ भनेपछी चोरले दिदीलाई झुकाउछ र माथी तर्फ लाग्छन।
चोर्ने उदेश्यका साथ् प्रवेश गरेका उनले तेश्रो तलाको बैठक कोठामा पुगेर यता उती हेर्दा कोहि देख्दैनन र बिस्तारै दराज खोज्दै अगाडी बढ्छन। दराज देख्ने बित्तिकै उनले सुनहरु पोको पारेर खाटमा जम्मा गर्न सुरु गर्छन।
बिस्तारामा सानो बच्चा मात्र देखेपछि चोर्ने उदेश्य पुरा हुने भन्दै सबै सामान प्याक गरेर भाग्न खोज्दा त्यही कोठामा जोडिएको शौचालयबाट एकजना महिला निस्किन्छिन र भन्छिन भाई यो के गरेको ? चोरले पनि बस्तारै दिदि केहि हैन म सबै सामान यहि रख्दिन्छु भन्दै भाग्ने बाटो खोज्दै गर्छन।
एकातिर चोर घरभित्र पसेको छ अर्को तिर सानो बच्चा आडैको बिस्तारामा छ। सम्पतिको भन्दा पनि दिदीलाई बच्चालाई केहि गर्छन कि भन्ने डर थियो । चोरले बिस्तारै भाग्ने प्रयास गर्दै गर्दा भर्याङ्गमा चोर पुगेपछि दिदि कराउन चिच्याउन सुरु गर्नुहुन्छ।
अफिसको लागि तयारी हुदै गरेका दाईले त्यही बेलामा आवाज सुनुहुन्छ र चोरलाई समात्न सफल हुनु भएको छ। चोरले भाग्ने क्रममा हातमा नै सुन,गहना बोकेर भाग्दै गरेको थियो। स्थानी बासिन्दाको सहयोगमा चोर्ने उद्यश्यका साथ् घरमा आएका चोरलाई रंगेहात पक्राउ गरी प्रहरीको जिम्मा लगाइएको छ।
Last Updated on: August 14th, 2021 at 12:11 pm